Umfundisi we-Accounting, Nkk Navitha Sewpersadh, oyiChartered Accountant nenhloko yekomidi le-Accounting Marketing eMgungundlovu usebenzise lelithuba ukwazisa abafundi bamatikuletsheni ngenhlobo yezifundo abangaziqhuba eNyuvesi. Uthemba ukuthi ngokubazisa ngezifundo zezibalo ezikhona eNyuvesi, laba bafundi bangase bakubone ukubaluleka kokuqhuba imfundo ephakeme e-UKZN.
Abakwa- E&Y bakhuthaze ukuba abafundi bamatikuletsheni bafundele ukuba ngamaChartered Accountant ngaphansi kwemifundaze abanayo enkampanini.
Umqondisi we-E&Y, Nksz Jane Oliver uxwayise abafundi ngokuthi badingani ukuze ube yiCA enempumelelo. UMnu Jeremy Beukes ongumphathi weHuman Resources uthe uchazwe ukubona izinga lomsebenzi nokuzimisela okutshekngiswe abafundi abenza unyaka wokugcina e-UKZN. ‘Iningi labo lisezingeni esingalamukela njengama-Accountant asafufusa kwa-E&Y. Sinxusa abafundi abaphuma emakhaya antulayo ukuba bawengamele lomkhakha njengoba kunesidingo esikhulu samaCA awalapha e-Africa,’ kusho uBeukes.